Dreame H11 Wet na Dry, nyocha dị omimi | Ozi gadget
Miguel Hernandez | 28/12/2021 10:59 | General, Nyocha
Ọchịchọ m ka nọ n'ọnọdụ dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ na-enye oke mma / ọnụahịa ka mma na ngalaba nhicha ụlọ smart, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ndị na-ehicha oghere ha, robots na ngwa ndị ọzọ na-elekwasị anya n'ime ka ndụ anyị dịkwuo mfe ma a bịa ihicha ụlọ anyị. .
Oge a, anyị na-eleba anya nke ọma na H11 Wet na Dry ọhụrụ, ihe na-ehicha ọkụ nke na-ekpochapụ miri ma na-ehichapụ na otu ngafe. Anyị na-egosi gị ngwaahịa Dreame ọhụrụ a ma anyị na-agwa gị ihe ahụmịhe anyị nwere na iji ngwaahịa a eme ihe mgbe niile nke gbanwere mpaghara ebe a na-enyeghị ọtụtụ nhọrọ ọzọ.
2 Ọdịnaya ngwugwu na ike
3 Njirimara nka na ahụmịhe onye ọrụ
Mgbe ị nzọ na ika dị ka Dreame, ị maralarị ihe ị ga-atụ anya ya n'ihe gbasara imewe na ihe, e ji ya mee ihe dị mma na ọkụ ma na-eguzogide plastik nke nyere ọtụtụ n'ime ngwaahịa ya àgwà na-enweghị atụ, ma ọ bụghị Iji dị obere na ihe nhicha ọhụrụ H11, nke anyị nwere ike jikọta ngwa ngwa na akara Eshia na nlele. The akụkụ bụ nnọọ akpọ, na nke a na-esonyere a ngụkọta arọ nke gburugburu 4,7kg n'ime ahụ karịrị akarị.
Ngwa a dị ịtụnanya nwere ike ịbụ nke gị na ọnụahịa kacha mma
Nkasi obi agaghị emeri, nke ahụ pụtara ìhè, Otú ọ dị, rollers ya na ike nke ahịhịa ga-eme ka ọ dịrị anyị mfe ịme ihe ndị ahụ. Porting bụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya, ya mere ntinye nke ịchaji na ebe na-ehicha onwe ya nke ga-adị na ala. N'ezie, anyị anaghị elele ngwaahịa kachasị dị mfe na nke kachasị dị iche iche nke ika ahụ, agbanyeghị, anyị kwesịrị iburu n'uche ebumnuche nke Dreame H11, dị anya site na ihicha ọkụ na nke mbụ, kama lekwasịrị anya na oghere buru ibu yana enwere ọtụtụ ohere. Ihe a niile anyị kwesịrị iburu n'uche tupu anyị aga n'ihu na ịzụrụ.
Ọdịnaya ngwugwu na ike
N'adịghị ka ọ nwere ike iyi, Dreame H11 a na-abịa na ngwugwu kọmpat, aka nke aluminom bụ ìhè na mbughari, na mgbakwunye na ikwe ka anyị jikwaa ọrụ nke onye na-ehicha ọkụ na bọtịnụ nwere ezigbo aka. A na-etinye ahụ ahụ nke nwere moto, broom na tankị mmiri abụọ ozugbo na igbe ahụ, na akụkụ niile na-eyi na mmezi na-ewepụ, dị ka ọ na-eme mgbe niile na Dreame. Site na usoro "pịa" anyị ga-etinye aka na anyị ga-enwe Dreame H11 zuru ezu kpọkọtara iji malite na ule mbụ.
Ọdịnaya nke ngwugwu dị ka anyị kwuru bụ nnọọ spartan, anyị na-ahụ isi ahu ebe okpukpu abụọ tank, moto na aziza, odori na onwe-ehicha isi, ọnụ na ike nkwụnye na ụdị «ahịhịa» na. mgbakwunye ya maka mmiri ma ọ bụ ihe nhicha nke ga-enyere anyị aka idobe tankị mmiri dị ọcha. Na ngalaba a Dreame H11 na-enye anyị mmetụta dị mma, ntinye ngwa ngwa na anyị achọghị ntụziaka ka aga. Ekwesiri ighota na Dreame na-agụnye mmiri mmiri dị ọcha nke anyị ga-enwe ike ịzụta iche iche n'oge na-adịghị anya, n'agbanyeghị na anyị achọtabeghị ebe a na-ere ere.
Nke ahụ kwuru, ị nwere ike ịnọ na-eche ihe mere anyị ji ekwu okwu na otutu nke "Ego ego", Nke a bụ n'ihi na Dreame H11 nwere tankị abụọ dị iche iche, otu n'ime mmiri ruru unyi nke 500ml nke bụ nke a na-ahụ n'akụkụ ala nke broom, na otu mmiri dị ọcha nke 900ml nke na-ahụ maka inye mop na mmiri mmiri na-ehicha ihe. Ebe a na-agba mmiri ruru unyi bụ ebe ọ bụkwa ya na-ahụ maka ịkwanye unyi anyị na-aṅụ.
Ihe ngosi panel nke ọrụ dị n'elu ga-egosi anyị ụdị nhicha abụọ: Standard na Turbo. N'otu aka ahụ, ọ ga-agwa anyị banyere pasent nke batrị fọdụrụ na ma ọnọdụ nhicha onwe ya na-arụ ọrụ n'oge ahụ, nke ọ dị mkpa ka ọ nọrọ na ọdụ ụgbọ mmiri. Nke a bụ otú na aka anyị na-ahụ bọtịnụ abụọ n'ihu iji mee ka ike dị ọcha dị iche iche na-edozi, na otu n'ime akụkụ elu nke aka ahụ na-ahụ maka ịgbalite ọnọdụ nhicha onwe ya.
Njirimara nka na ahụmịhe onye ọrụ
Nke mbụ anyị ga-ekwu maka nnwere onwe, Dreame H11 nwere batrị 2.500 mAh nke ga-enye anyị ihe ruru nkeji 30 nke nnwere onwe na ọnọdụ ọkọlọtọ, A ga-ebelata nke ọma ma ọ bụrụ na anyị aga ihe Dreame na-ewere ọnọdụ turbo. Maka akụkụ nke ya, ihe na-ehicha oghere nwere a 10.000 pascal ike suction, dị ntakịrị ala karịa ihe ọ na-enye na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka ihe nhicha aka ya kacha ewu ewu, ebe ọ nwere ike iru 22.000, ebe ọ bụ na nke ahụ. ya rotary ahịhịa ruo 560 revolutions kwa nkeji Ọ ga-enyere aka ijide unyi kacha kpuchiri ekpuchi na nke a na-enye ohere ka ngwaọrụ ahụ rụọ ọrụ na obere ike mmịpụta.
Maka akụkụ ya, mkpọtụ ga-eru 76dB nke na-adaba tere aka nke nsonaazụ kacha mma nke ika ahụ nwere ike ịnye na ngwaọrụ ndị ọzọ. Dị ka uru, anyị nwere ike ịzụrụ ya Amazon, na nkwa niile nke a gụnyere.
Otu n'ime nsogbu ndị bụ isi nke anyị chọtara, karịa ibu arọ, bụ ọkpụrụkpụ nke ahịhịa, nke ga-egbochi anyị ịbanye n'okpuru ụfọdụ ngwá ụlọ, n'otu ụzọ ahụ ma na-eburu n'uche ebe Dreame H11 na-aga, ọ gaara abụ. na-akpali na-agụnye a Ikanam ìhè na ahịhịa. N'aka nke ya, na dịka enwere ike ịtụ anya, Nsonaazụ na parquet na-agbawa obi, oke mmiri ga-ahapụ akara ngosi, agbanyeghị, nke a bụ ngwaahịa emebere maka ala ala, nkume nkume na ọbụna vinyl, ebe nsonaazụ ya dị mma.
Nke a Dreame H11 bụ ngwaahịa ọhụrụ nke na-esetịpụ ụkpụrụ ndị a ga-agbaso na ngalaba ahụ dị ka ntụaka, ọ bụ ezie na ọ nwere obere ihe ndị a ma ama dị ka ibu na ịnweta ike n'okpuru ngwá ụlọ, ọ nwere ike ịṅụ mmiri dị mma, ihe ndị dị mma nke ihe owuwu na imecha na ya. ga-eme ka ihe dịrị anyị mfe ma ọ bụrụhaala na anyị enweghị parquet ma ọ bụ ala osisi. Ọnụ ego ya dị gburugburu na 320 euro na mbụ ebe ire ere dị ka Amazon.
H11 dị mmiri ma kpọọ nkụ
Ihe na: December 28 nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: December 28 nke 2021
Ihe emechara nke ọma na nkwa imewe
Ike dị mma yana ezigbo poselin mezuru
Ọ dị mfe ịkwaga
Ịnweta ọjọọ na arịa ụlọ dị ala
Nsonaazụ ọjọọ na parquet
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Dreame H11 Wet and Dry, nlebanya miri emi nke oghere / mop a